Mombamomba ny orinasa - Blch Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.
Niorina tamin'ny Aogositra 2004 ny BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd, ao amin'ny faritra indostrialy fampandrosoana YUEQING no misy azy. Ny orinasa dia mandrakotra faritra 24000 ㎡, manana tobim-pamokarana 5 misy mpiasa mihoatra ny 300. Orinasa tsy miankina isam-paritra misahana manokana ny R&D, ny famokarana, ny varotra ary ny fikojakojana ny serivisy amin'ny singa pneumatika.
Manome vokatra pneumatika andiany dimy izahay izao, toy ny fitsaboana loharano an-habakabaka, fametahana pneumatika, varingarina, valizy solenoid, fantsom-basy PU ary basy an'habakabaka, maodely maherin'ny 100 ary entana an'arivony manerantany .dia nandalo ISO 9001: 2015 fanamarinana, ISO 14001: 2015 mari-pahaizana momba ny fitantanana tontolo iainana sy mari-pahaizana CE an'ny EU. Izahay koa dia National High-tech Enterprise, National Standards fampandrosoana fikambanana.
Raisinay foana ny "High Quality" ho zava-dehibe indrindra, ireo ampahany manan-danja dia novokarin'ny fanodinana mandeha ho azy, izay manome antoka tsara ny kalitaon'ny fitaovana azo antoka.
Mandany fotoana maharitra amin'ny fitsapana maharitra izahay ary manizingizina fa ny vokatra tsirairay dia tokony hojerena sy hosedraina alohan'ny fandefasana. Mandritra izany fotoana izany, ny "After Service" dia ny fanoloran-tenantsika, satria fantatray fa ny mpanjifa dia hahatakatra tsara ny fihetsika tompon'andraikitra ary hamorona toe-javatra mandresy hatrany.
+ Ekipa mpitantana R & D
Sanda famoahana isan-taona
Mikasika ny fampiasana olona, ​​ny orinasanay dia manaraka hatrany ny fitsipiky ny "olona-oriented" ary manaraka ny fenitry ny asa hoe "manao izay fara heriny ny olona, ​​azo ampiharina ny habetsahana". Amin'ny fisafidianana na fampiroboroboana ny talenta dia manizingizina hatrany izahay hoe "olona mahay, olona salama," Ny fahaiza-miteny "tsy mihevitra velively ny havana, namana, fifandraisana, fifandraisana ary fiaviana amin'ny fomba fampiasana olona, ​​fa mifantoka amin'ny tena fahaizan'ny mpiasa , mifantoka amin'ny fahombiazana, fanabeazana maivana, asa mafy ary vanim-potoana maivana, manaraka ny "fahamarinana, fahamarinana ary fisokafana." Ny fitsipiky ny fifaninanana, ny hatsarana.
Mikasika ny fiofanana ho an'ny mpiasa dia manombana ny fahombiazan'ny fiofanana amin'ny alàlan'ny fitaovam-pianarana isan-karazany, ny fampianarana CD-ROM, ary ny fanadinana aorian'ny fianarana. Mamporisika sy mamporisika ireo mpiasa mazoto izahay, ary manakarama manam-pahaizana hiteny amin'ny mpiasa.
Mamokatra vokatra mazoto mamorona orinasa mikarakara